Mgbe ị na-unwrap ekwentị mkpanaaka gị si ya uka-napụtara ala, ị na-aghọta na ihe a catchy na-akpali akpali ihe ọ ga-abụ ma ọ bụrụ na ụda na-arụ na ya bụ ọkacha mmasị ringtone. A onye ringtone hoo haa na-egosi ihe ọ na-kpaliri mmasị. Nke a pụrụ iduga a onye njem na-amalite na-achọ na idi ocha song na smooths obi gị.
The mkpa ka download zuru okè ụdaolu na anyị ekwentị aghọwo ike, nke a bụ n'ihi ụdaolu anyị ka anyị mata onwe anyị na klas na kwa, na-aghọta onye na-akpọ (na a bụrụ ebe ị nwere dị iche iche ụdaolu). Merchant na-arụsi ọrụ na-eto eto kwa ụbọchị, ha ọchịchọ bụ iji hụ na ha na-akpata na mmezi dollar nke gị, dị nnọọ ibudata ụdaolu ha saịtị. Nke a jụrụ ike ka ringtone ndị hụrụ ndị chọrọ ahụ zuru okè pitch na-ahụ otu see na nkume ha color, n'ihi na ndị a na saịtị ndị dị nnọọ oké ọnụ mgbe ha na-enye ọrụ ha. Otú ọ dị, e nwere saịtị nke onye ọ bụla gburugburu ụwa nwere ike ibudata ringtone na ha hụrụ ha color ọ na-eri mgbe nile. N'okpuru bụ ụfọdụ nke saịtị na-enye ọrụ a n'efu.
Zedge bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu ringtone saịtị n'etiti ringtone hụrụ nakwa n'ihi ndị na-amasị mara achọ mgbidi akwụkwọ ha igwe. Ọ malitere ya arụmọrụ banyere 10 afọ gara aga na ebe ọ bụ mgbe ahụ, ọ ka ụtọ a otutu ihe ịga nke ọma site ya lekwasịrị ahịa, ọtụtụ n'ime ya onye ọrụ-ekwu na ha na-ngụkọta afọ ojuju site na ọrụ nyere.
Mobile9 bụ a website nke nwere ibu nke free downloadable-awụ ọsọ n'ugwu nke onye ọ bụla nwere ike nwere ohere. Otú ọ dị, n'adịghị ka Zedge saịtị a na-achọ ka ị mepụtara a free akaụntụ na ha mere na ị pụrụ-enwe ike inwe ọrụ ha. Ha na-ekwe ndị mmadụ ibudata iche mp3 ụdaolu na downloadable ngwa maka free na na ọ na zoro ezo-akwụ ụgwọ.
A bụ ihe ọzọ na-akpa ike weebụsaịtị na natara ezigbo mma reviews si ya ọrụ. Ọ nwere ihe ndekọ nke ihe karịrị nde ise free downloadable ụdaolu; Otú ọ dị, n'elu ihe mere na ọ na-ama ama site na ọtụtụ bụ n'ihi na ị nwere ike mfe ka gị onwe gị ringtone si a collection nke ha. Nke a nwere ike mere site atọ nanị mfe nzọụkwụ nke dị na saịtị.
Ọ bụ ihe yiri nke ndị mobile9 dị ka ọ na-achọ ndị mmadụ ịmepụta otu akaụntụ iji amalite na-anụ ụtọ ike ọrụ awa n'ebe ahụ. Ha na-atụle Uru na mastery nke ụdaolu na softens obi ma ọ bụ dị ka na-eto eto na-akpọ ya, ringtone na swag. Iji budata ringtone site na saịtị a ị na-agagharị na site a collection nke ọtụtụ, mgbe ahụ, na-ege ntị onye nke masịrị gị na ibudata ya ma ọ bụrụ na ọ bụ gị na uto.
Ọ maara n'ihi na àgwà nke ọrụ ya awade, nke a bụ n'ihi na ọtụtụ ndị reviews nyere saịtị a show positivity. Ọ na-ekwe ya ọrụ na-enwe ike ibudata ụdaolu site na nnukwu collection nke ha. Ọrụ na-ike ime nchọgharị site site na ige nke genre maka mfe results nke ụdị ụda ha chọrọ-egosipụta na ha igwe.
A bụ ihe ọzọ website na i nwere na-enye ohere ka ndị mmadụ banye maka free na ha; Otú ọ dị, ị ka nwere ike-enwe ike inwe ọrụ ha na-enweghị na-eke ihe na akaụntụ. Ndị kasị idi ocha atụmatụ banyere nke a n'anya m na i nwere ike ọ bụghị naanị download a ringtone, ma ị nwere ike bulite dị ka mma. Saịtị na-enye a nzọụkwụ site nzọụkwụ ntụziaka na otú ibudata ụdaolu maka 'uwa na-abụghị nēje na usoro.
Nke a na saịtị ọ bụghị nanị na-emekọ na nke kacha mma ụdaolu na ringtone ụlọ ọrụ, ma na-na nti mgbidi akwụkwọ, gburugburu na kasị mma egwuregwu na ngwa ọdịnala dị na ahịa. Ihe a nile n'ihi na free na na download click a chọrọ maka subscriber na-enwe ebube ọrụ awa. Saịtị na-achọ ka ị na-agụ ha usoro na ọnọdụ tupu ya ekee akaụntụ na ha.
Cellmind bụ a pụrụ iche website nke a na-neatly ahazi na otu nwere ike mfe-agagharị gburugburu na-ọma ya ma ọ bụ onwe ya na ya. Ọ bụghị nanị na awade free downloads, ma na-enye ohere maka ha na-amasị free downloads nke mgbidi akwụkwọ na égwu. Saịtị nwere ezigbo uru nke otuto na ọ na-atụle a mbụ na-eto eto ringtone website. N'agbanyeghị nke a, ọ na-adịghị nwere njuputa dịgasị iche iche nke ụdaolu ịhọrọ site na.
Nke a bụ a na saịtị ukwuu n'ime-emekọ Indian Mp3 ụdaolu. Ha jide iche dị otú ahụ songs na i nwere ike inwe ohere ha site n'inyocha ọkacha mmasị gị song; Otú ọ dị, e nwere ndị ọzọ nhọrọ na ga-abịa kenha genre unu họọrọ. Saịtị iche site àjà free ụdaolu nakwa awade Bollywood mgbidi akwụkwọ, gburugburu na videos.
The Unlocker nwere a dịgasị iche iche nke ụdaolu dị site ya na saịtị nke bụ n'efu. Ọ bụ ezie na ị ka nwere ike ibudata ringtone site na saịtị na-enweghị na-eke ihe na akaụntụ, a otutu nke ike iche dị maka gị ma ọ bụrụ na otu akaụntụ na-kere. Saịtị onwe ya na-mejupụtara mara mma atụmatụ ona ọrụ.
Nke a bụ isi website nke nwere awade a iche mp3 ụdaolu si n'ezi ọlaedo Oldies nke Louis Armstrong na nke etiti njehie nke Diana Ross na nri n'ime ugbu a nke na-ewu ewu ringtone siri nke taa. Saịtị na a maara na-ebu mpịakọta nke ringtone ọdịnaya eleghị anya ọbụna karịa Mad ụdaolu, Otú ọ dị ya-atụle ga-erughị ala ka a otutu nke nje na-ebudatara na ringtone ọdịnaya, ma n'aka ezuru ị nwere ike ghara uche ọ bụla ringtone ebe a.
Nke a bụ ihe dị mfe ibudata website dị ka niile ụdaolu na-categorized dị ka genre, ị nwekwara ike ịchọ na mmasị ringtone nke nkume gị. Nke a bụ n'ihi saịtị na a maara na-enwe ibu nke ụdaolu na gị ngosi, Otú ọ dị n'adịghị Dilandau ọtụtụ n'ime ya ringtone bụ site 90 ruo ugbu a.
Download jụọla oyi.
Nke a bụ free ringtone weebụsaịtị na ukwuu n'ime enye ya ọrụ ndị na-eji Sony Ericsson mobiles. Nke a mere iji hụ na ha nwere ike mfe ga-esi jide nke na-adọrọ mmasị ringtone na ha nke ukwuu ọchịchọ. The website bụghị nanị na-enyere Sony Ericsson ọrụ ibudata ụdaolu, kamakwa mgbidi akwụkwọ na gburugburu dị ka mma.
Nke a bụ free ringtone website nke siworo na-arụ ọrụ n'ihi na ihe karịrị afọ iri. Saịtị nwere isi upgrades n'oge na-adịbeghị na ya anya otú mara na ruo ọkọlọtọ karịa tupu. Ọ allocates free ụdaolu dị ka mpaghara na obodo nke ebe saịtị a na-anya si na mfe maneuverability a mere n'ime saịtị.
My obere ekwentị.
Nke a website ekwe ka ringtone hụrụ na-enwe ike ike free ụdaolu na suut ha si a dịgasị iche iche nke Mp3 ringtone na ị tube videos. Ọ na-nwere nhọrọ nke na-azọpụta niile ringtone na ị chọrọ n'ime otu nchekwa Tupu nbudata ha. Nanị manụ ihe banyere nke a website bụ mgbasa ozi na-agbakwụnye na-anọgide na-popping.
Jelly cell bụ a na saịtị nke adịghị a sara nzukọ nke ụdaolu ma ụdaolu na-ejikari kwalite na ị nwere ike ibudata ụdaolu nke kasị nso-nso-awụ ọsọ n'ugwu. Saịtị ọbụna kwe ahịa na-eme ka ha Mp3 ụdaolu si mobile faịlụ na ọbụna site YouTube atụmatụ. Ọ na-atụ aro na ọ nwere otutu ewu ewu n'agbanyeghị ya niile adịghị emezi emezi.
Ọ bụ ezie na saịtị a bụ adịghị nwere ike akaụntụ ma ọ bụ abanye na nhọrọ, ọ bụ ya mere yiri Dilandau dị ka ọ na-awade ọlaedo Oldies, n'etiti afọ songs na ugbu n'anya. Otú ọ dị, saịtị adịghị nwere nnukwu collection nke songs na nsụgharị dị iche iche; nke a bụ n'ihi na ọ bụ a ọhụrụ na saịtị na nwere ike isi ike upgrading ya nchekwa data.
Nke a bụ a website na ukwuu n'ime-emekọ mobile ringtone nke ugbu a n'ọgbọ. Ọ bụ ihe dị mfe na saịtị, ma na a mma n'anya ngosi na mfe ime iji nyere onye ọrụ na-enwe ike na-awụgharị gburugburu na ala. Ya niile ringtone bụ free na nnukwu collection nke ugbu a ọgbọ ringtone bụ na saịtị a. E nwekwara otu nhọrọ nke inwe ike-ekwurịta okwu na ahịa elekọta bụrụ na a nsogbu banyere saịtị na-ebilite.
Mee ka gị na Own Ringtone.
Nke a bụ free ringtone saịtị na onye zuru ike atụmatụ nke inwe ike iji tọghata gị ringtone faịlụ n'ime zuru okè-aj u ka Suite ekwentị gị ringtone. E nwere atọ ụdịdị na ike ka i nwee ike mezuo nke a ya bụ, Easy, Advanced na ọkachamara ụdịdị. The ụdịdị nwekwara ihe nhọrọ na ọrụ nwere ike hazie si n'ihu nbudata ringtone na masị ha.
Nke a bụ a website na-achọ ndị chọrọ iji ha ọrụ na-mbụ anyị abanye n'ime ha na saịtị. Mgbe mmelite na-emekarị ka mere na ọ pụrụ ịnabata ọhụrụ iche songs na ahịa. Downloads nke ndị a ụdaolu bụ ndị dị mfe na ihe kwesịrị ekwesị ụkpụrụ nduzi na-egosipụta na-eduzi gị na-esi ndị chọrọ ụda.
Nke a bụ a website na mfe atụmatụ, mfe ịnyagharịa na-eji. Ọ dịghị nwere a obosara collection nke Mp3 ụdaolu; Otú ọ dị na-aj u n'ebe na-atụle ruo àgwà ụkpụrụ na akụkụ kasị mma ịbụ na ha bụ ndị free. Cell 11 na nso nso a adịkwa ya ama ruru ka manụ mmapụta elu na-agbakwụnye na ugboro ugboro-egosi na saịtị.
Nke a bụ a na saịtị ukwuu n'ime mere maka iPhone ndị ọrụ mkpa ụfọdụ àgwà ringtone metụrụ na ha iphones. The website dị ka ndị ọzọ ọtụtụ free ringtone saịtị na-achọkwa ka ndị mmadụ ịmepụta otu akaụntụ nke mere na ị pụrụ ịnụ ụtọ ọrụ ha. The iRinger nwere ihe pụrụ iche atụmatụ nke ebe ọrụ nwere ike na-enwe ike ikwu na a akpan akpan ringtone na ọbụna dịruru ya.
Saịtị a bụ pimped ka Suite a nkecha onodi, na ihe mara mma na idi ocha imewe. Ọ na-enye dịgasị iche iche nke Mp3 ụdaolu nke bụ mfe inweta ya ọrụ. Otú ọ dị, tupu nbudata nwere ike mere na ị nwere ike a free akaụntụ na saịtị; nke a ga-emekwa ka unu na-yana idobe okirikiri ka dịgasị iche iche nke ringtone ha na-enye. Saịtị na-enye ohere ndị ibudata free egwuregwu, ngwa ọdịnala na mgbidi akwụkwọ.
Nke a bụ a na saịtị mara maka ka ileba, na ka ileba, karịsịa na mbụ saịtị nke ya mara mma egosipụta site na saịtị onwe ya. Mara maka ya elu profaịlụ mgbidi akwụkwọ na nnukwu mpịakọta nke Mp3 ụdaolu, saịtị a kemgbe-enwe ike-ya ebube na-etu ọnụ nri nke ndusụk ini. Taa, e nwere a ọhụrụ mma na-enye ohere ọrụ na-akpa-abanye na iji na-amalite ụtọ ọrụ ha.
Nke a bụ obere na saịtị nke ka nọgidere na ya dị umeala n'obi atụmatụ maka afọ ugbu a; Otú ọ dị ya esetịpụ a dịgasị iche iche nke ụdaolu nke bụ ụtọ na ike ịhụ ndị ọzọ weebụsaịtị. The emezighị emezi nke saịtị bụ nanị ndị ogbenye na anya nke ya ngosi.
Nke a bụ a website na kemgbe na-arụ ọrụ ruo afọ ụfọdụ ugbu a; ọ ka jisiri-ya mfe na elu profaịlụ maka ezi ọnụ ọgụgụ nke oge ọ dịla na azụmahịa. Ha na-enye ndị ọhụrụ ringtone si mba dị iche iche na genre niile maka free na-enweghị urụk mmasị na ya. Ha na-nabata free mgbidi akwụkwọ nke na-ewu ewu siri nke dị maka download niile maka free.
Nke a bụ a website na-na-re quires ya ọrụ ike a free website iji amalite na-anụ ụtọ jụụ ọrụ awa n'ebe ahụ. E nwere otu nnukwu olu nke ụdaolu si PhoneZoo nchekwa data, ọtụtụ ndị Mp3 songs e nwere ọtụtụ si ndị uploaded ha faịlụ. Na nke a saịtị e a magburu onwe atụmatụ adịru ị na-ekwe dezie a ringtone.
Ọ bụ ezie na nke a saịtị na a maara na-ana ya ọrụ n'ihi na ụfọdụ na-akwụ ụgwọ ụdaolu, mkpachị site na ụfọdụ ezigbo ringtone na gbapụta kwukwara, sị, Ọ nwere nnukwu collection nke ụfọdụ tọrọ ụtọ oge gboo MP3 ụdaolu for free. Nke a na saịtị kemgbe maara dị ka onye nke kasị mma saịtị ibudata si dị ka ọtụtụ ihe ha na-enye bụ virus free, Otú ọ dị ha na saịtị adịghị anya na akụkụ ụfọdụ nke ụwa.
Dị ka aha-atụ aro-awụ ọsọ n'ugwu ebe a bụ ike na-, ebe ọ bụ na saịtị na-amị naanị-awụ ọsọ n'ugwu site na agwa ndị dị otú ahụ whale ụda na ndị ọzọ na anụ ụdaolu. Saịtị, Otú ọ dị na-enye ohere a Forum ebe ndị mmadụ ga na-ekwurịta dị iche iche ụda maka fun na izi nzube.
Nke a bụ a website na-akwado nile di iche iche nke igwe na-eziga ụdaolu na ha ozugbo ebudatara. Ka ibudata ụdaolu site na saịtị a dị mfe, ebe ọ bụ na e nwere ihe ndị doro anya guideless nke-egosi gị otú ị pụrụ ime ya.
> Resource> Free> Top 30 nrụọrụ ka Download Free Ringtones